Meydka Chris Kirubi oo la aasi doono Sabtida | Star FM
Home Wararka Kenya Meydka Chris Kirubi oo la aasi doono Sabtida
Meydka Chris Kirubi oo la aasi doono Sabtida
Waxaa uu qorshuhu yahay in maalinka Sabtida la aaso meydka ganacsade caan ahaa oo dhawaan geeriyooday laguna magacaabi jiray Dr.Chris Kirubi.
Berri ayaa munaasabad baroordiiq ah loogu sameyn doonaa xaafadda Karen ee magaalada Nairobi.
Isniintii ayuu maalqabeenkan isaga oo 80 sano jir ah u geeriyooday cudurka kansarka.
Mas’uuliyiin badan oo uu ka mid yahay madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta ayaa Kirubu ku tilmaamay shakhsi kaalin wayn ka soo qaatay wax soo saarka iyo kobaca dhaqaale ee dalka.
Previous articleWasiirrada Kenya iyo Soomaaliya oo wada hadlay
Next articleCiidamada Myanmar oo lagu eedeyay in ay tuulo gubeen